Kukho inani lamagama kunye namabakala anokukunceda ukuvakalisa uluvo lwakho . La magama kunye namazwi aqhelekileyo kubhala bokubhala , imibiko yokubhala, kunye nezinye iintlobo zokubhala ezijoliswe ekukholiseni .
Ukunika Ingcamango Yakho
Ukusebenzisa igama elichitshiweyo kunokukunceda ukuba ubonise uluvo lwakho xa wenza ingxelo . Umzekelo: Ukutshala imali kwiimpahla ezinobungozi obuphezulu kuyingozi. Ungavuma okanye ungavumelani nalo mazwi. Ukusebenzisa igama elinjengokungathi ngokungaqinisekanga uluvo lwakho malunga nesitatimende.
Nazi ezinye iinguqulelo kunye namazwi anokunceda:
(ininzi) ngokuqinisekileyo + isilathisi: Ezi mali-mali ziya kunceda ekuqinisekiseni ukulingana.
ngaphandle kokungabaza + isigatya: Ngaphandle kokungathandabuzeki, lotyalo-mali luyingozi.
Akungabazeki ukuba + isigatya: Akungabazeki ukuba siya kuphumelela ngale meko.
Ukufaneleka kweengcamango zakho
Ngamanye amaxesha, xa unikeza uluvo kubalulekile ukuba ufanele ukuthetha oko ushilo ngokushiya kwigumbi lokunye ukutolika. Umzekelo: Akukho naluphi na ukungathandabuzeki ukuba siya kuphumelela. ushiya igumbi lokunye ukutolika (akunakuphi na ukungathandabuzeki = igumbi elincinci lokungabaza). Nazi ezinye iinguqu kunye namazwi angakunceda ukufumana umbono wakho:
phantse / phantse + isichazi: Kungaze kwenzeke ukwenza iphutha.
ngokuyinhloko / ngokubanzi: + Ngokuyininzi umcimbi wokufumana inyaniso ngokufanelekileyo.
Zininzi iindlela / ezinye iindlela + / oku / oko, njl. Ngendlela ezininzi, ukubheja okuqinisekileyo.
Ukwenza uNgqina oluqinileyo
Amagama athile abonisa iimpawu ezinamandla malunga nento okholelwayo.
Umzekelo: Akuyinyani ukuba ndicinga ukuba ungekho. uqiniswa ngokungongeza igama elithi 'nje': Akuyinyaniso ukuba ndicinga ukuba ungekho. Nazi ezinye iinguqu kunye namagama angabinceda ukuqinisa ubungqina:
ngokucacileyo / nje + isichazi: Kulungile ukukholelwa ukuba ngoYohane.
Igama + nje: Lona kuphazamiseka nje kwinqanaba eliphambili.
kuphela / kuphela + okuqala, okugqibela: Lo kuphela nje ngowokugqibela kwiinkalo ezininzi.
igama eliqingqiweyo / elipheleleyo: Idiocy ecacileyo yeprojekti ithetha yona.
Ukugxininisa indawo yakho
Xa echaza ukuba isenzo sinyaniseka, ezi binzana zinceda ukugxininisa. Umzekelo: Senze isigqibo ngokuphindaphindiweyo ukuba kufuneka siqhubeke phantsi le ndlela. Nazi ezinye iibinzana ezikunceda ukugxininisa inqaku lakho:
ngaphezu kwesiphakamiso: Kungaphezulu kunokwenzeka ukuba uyahluleka.
ngakumbi nangaphezulu + isichazi: Ndiyesaba kuba nzima ngakumbi ukukholelwa kuwe.
Xa uchaza uluvo lwakho kubalulekile ukunika imizekelo ukuxhasa zakho iingxelo. Umzekelo: Kungaphezulu kunokwenzeka ukuba uyahluleka. Kwimeko kaMnu Smith, akakwazanga ukulandelelana kwaye wasenza ukuba sihlawule iintlawulo ezinzima. Amagama alandelayo asetyenziselwa ukunika imizekelo ukuxhasa isiphakamiso sakho.
njengegama: + Abagxeki balo mgaqo-nkqubo, njengoJack Beam weSmith kunye noonyana, bathi ...
Lo ngumzekelo wecandelwana: Lo ngumzekelo wesidingo sethu sokwenza utyalo-mali.
Kwimeko yegama: Kwimeko kaNksz Anderson, inkampani yagqiba ...
Ukuthabatha Ingcamango Yakho
Ekugqibeleni, kubalulekile ukushwankathela uluvo lwakho ekupheleni kwengxelo okanye enye itekisi ekholisayo.
Umzekelo: Ekugqibeleni, kubalulekile ukukhumbula ukuba ... Le migaqo ingasetyenziselwa ukufingqa uluvo lwakho:
Konke kuzo zonke: Zonke kuzo zonke, ndiziva ngathi kufuneka sidibanise ngenxa ...
Ekugqibeleni: Ekupheleni, kufuneka sigqibe ngokukhawuleza ukuphumeza esi sicwangciso.
Ekugqibeleni: Ekugqibeleni, makhe ndiphinde inkxaso yam enamandla ...
Uncedo ngeeNgxaki zePeloli kwiiKlasi ze-ESL
Amanzi kwi-Space Ngaba Ngokwenene ikhona
Iindidi zeMimoya kwiNkqubo ePhezulu yokuPhepha
Ukuxinezeleka kweDanakil: Indawo eDume kakhulu emhlabeni
Yintoni i-Draft Draft?
Imbali emfutshane yeMauritania
IKhotan - Inkunzi ye-Oasis State kwiSilk Road e-China
IziCwangciso zeSifundo Ukujolisa kwiTenti kunye neCV Conjugation